“နောနော်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။ လက်စွမ်းပြတဲ့ ပျူစောထီးတွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးရမလား” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » “နောနော်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။ လက်စွမ်းပြတဲ့ ပျူစောထီးတွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးရမလား”
“နောနော်ကိုပဲ အပြစ်တင်ရမလား။ လက်စွမ်းပြတဲ့ ပျူစောထီးတွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုးရမလား”
Posted by Good Idea on Aug 30, 2010 in Celebrity | 14 comments
28.8.2010ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဆိုတော် နောနော်ဧ။်တစ်ကိုယ်တော်ရိူးပွဲ
တွင် သူဧ။်အခွေသစ် အိပ်မက်ထဲကလူ သီချင်းများကိုသာသီဆိုခဲ့ပြီး အစီအစဉ်ကို ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင် ပရိတ်သတ်များက
မကျေနပ်သဖြင့် ရေသန့်ဘူးဖြင့်ပေါက်ကာ အော်ပြောတော့ “ခင်ဗျားတို့က ရိုင်းတယ်လို့ ပြောခဲ့တယ်။
နောက်တော့ “မီးတွေအားလုံးမှိတ်ပြီး ဆင်းသွားတော ပရိတ်သတ်က အော်ဆဲတယ်။ အဲဒီမှာပဲ လုံခြုံရေးဆိုတဲ့သူတွေက နံပါတ်တုတ်တွေနဲ့ လူငယ်တွေကိုလိုက်ရိုက်တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်လည်းအပြေးလွှားပေါ့။ အရေးခင်းလိုပါပဲဗျာ။ အံ့သြဖို့လဲကောင်းတယ်။ ထမင်းရှင်တွေကို စော်ကားရဲတယ်။ မသကာဆို သူပွဲထိန်းတတ်ရမှာပေါ့။ အခုတော့ဗျာ…
မိတ်ဆွေတို့လည်း ကြုံဖူးမှသိလိမ်ုမယ်။ ဒါက အတင်းမဟုတ်ဘူး။ ကောလဟာလလဲမဟုတ်ဘူး ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတာပါ။
ရင်နာစရာကောင်းတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့လို လူငယ်လေးတွေ ရေတွေဗွက်တွေကြား လူးလှိမ့်ပြီး နံပါတ်တုတ်အောက်မှာ ပြားပြားဝပ်နေရတယ်။ အခုဒီစာဖတ်တဲ့လူတွေမှာလည်း ကြုံခဲ့တဲ့လူပါချင်ပါမှာပါ။
သူ့ကိုချစ်လွန်းလို့ မိုးရေထဲမှာ အားပေးနေတဲ့ပရိတ်သတ်ကို ဒီလိုအဖြစ်မျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့စေခဲ့တာ တော်တော်ဆိုးဝါးတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်မှာ ကင်မရာမပါသွားလို့ပေါ့။ မိတ်ဆွေတို့ကိုပြချင်တယ်။ ခံရတဲ့သူတွေ သနားပါတယ်ဗျာ။
သူတို့လေးတွေနှုတ်က ပြောတဲ့စကားတွေဆို ပိုတောင်ခံစားရခက်တယ်။
နောနော်ရယ်။ မင်းကိုချစ်လွန်းလို့ မိုးရေထဲမှာလာပြီး အားပေးတာ မင်းမို့လုပ်ရက်တယ် တဲ့။ တော်ပါပြီ ရင်ထဲမှာ မကျေနပ်လွန်းလို့ ရေးနေတာပါ။ သူပြုတဲ့ကံ သူပြန်ခံရမှာပါ။
( သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းရေးထားတဲ့စာကို ဘော်ဒါတယောက် ပေးပို့လာတာပါ။ အဲဒီနေ့က သူလိုက်မသွားခဲ့ဘူး။ ပွဲကို သွားတဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတော့ ခေါင်းကွဲပြီး သွေးတွေနဲ့ ပြန်လာတယ် ဆိုပဲ။)
ကျနော်လဲ နောက်ကို သတိထားရတော့မယ်
ရှိုးပွဲ သွားရင် အဲလိုပွဲမျိုးဆို မသွားတော့ဘူး..
သူငယ်ချင်းတွေကိုလဲ ပြောထားရမယ် …
အဲဒီအကြောင်းကို အဆိုတော်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကပြန်ပြောလို့ ကြားလိုက်တယ်။
နောနော် က သူ့အခွေသစ်ကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ချင်တာဆိုရင် ရှင်းရှင်းပြောထားရင်ပြီးတာကိုပဲ
နောက် ပရိတ်သတ်ကို စော်ကားတာက ပါသေးတယ်။
အလကားပါကွာ မင်းတို့မို့လို့ သွားအားပေးကြတယ် ။ တကယ်ဆိုရင် အနုပညာရှင်က ပရိတ်သတ်ကိုလေးစားရမှာပေ့ါ ။
လူငယ်တွေအပျော်ပါးလျော့ဖို့ ကောင်းပြီနော် ။ နဂိုထဲကို က ဟိုကောင်တွေက လက်သရမ်းနေတာ ။ ဘာဖြစ်ဖြစ် … ဖြစ်တာနဲ့ တီးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ ။
တကယ်တော့ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဆိုတာ ပရိသတ်အပေါ်မှာ မှီခိုနေကြတာ။ သူတို့ရဲ့ စားဝတ်နေရေး ဒါမှမဟုတ် အဆိုတော်က ချမ်းသာနေမယ်ဆိုရင် သူ့ အနုပညာကို ပရိသတ်ရှိမှ ထုတ်ဖော်ခွင့်ရကြတာပါ။ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့ ပရိသတ်ပေါ် ဒီလို မစော်းကားသင့်ပါဘူ။
ပြောရင်းနဲ့ စိတ်တိုလာပီ @#$^%$%^*&*)
ရှိုးပွဲတိုင်းမှာ မိုက်ရိုင်းစော်ကားပြီး လက်သရမ်းတဲ့ကောင်တွေပါစမြဲပဲဟာ .. အဲ့ဒီကောင်တွေပဲအမြဲအတီးခံရတာပဲလေ..
ခုလဲ အဲ့လိုထဲကတစ်ယောက်ကရမ်းပြီးပြောတာနေမှာပေါ့ ..
ဒီလောက်ရှင်းထားတာတောင်မှ ဒီမှာလာပြီးနောက်တစ်ခုထပ်လာသေးတယ်ဟုတ်လား…. ဒင်းတို.တွေဒင်းတို.တွေ… ရှင်းနေရတာတွေလည်းများနေပြီ… ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြရသေးတာပေါ့………. ကဲပင်ကီရေ…. တို.တွေ.. ထပ်ပြီးရှင်းပြလိုက်ကြတာပေါ့…
တစ်ဖက်သက်စကားတွေနဲ့ပဲ.. နားယောင်နေကြတယ်.. ဟင်းးး ခက်တယ်ခက်တယ်.. ကိုယ်တိုင်လေ့လာစုံစမ်းပြီးမှ..ပြောသင့်ပါတယ်
twitty said: On September 3, 2010
ပရိတ်သတ်ကို မစော်ကားသင့်ဘူးဆိုရင်… ပရိတ်သတ်ကလည်း ကိုယ်ချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်ကို မစော်ကားသင့်ဘူးလေ..
ပွဲပြီးလို့ဆက်မဆိုတာ သောင်းကျန်းစရာလား.. ဆဲဆို အော်ဟစ်စရာလား။ ပရိတ်သတ်သောင်းကျန်းလို့ လုံခြုံရေးကထိန်းတာ နောနော်နဲ့ဘာဆိုင်လဲ..။
သူလည်း သူ့ပွဲကို ဘယ်အချိန်…ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ထားပြီးသား။ ပရိတ်သတ် ဆိုခိုင်းတိုင်း မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဆိုနေရမှာလား။ ဒါသူ့စည်းမျဉ်းနဲ့သူပဲ…
ပွဲကလဲ မျိုးကြီးတို့လို ခွေထုတ်ဖို့ One man show လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ သူ့အခွေဝယ်တဲ့လူတွေကို အပြင်မှာ live show ဆိုပြချင်လို့ လက်မှတ်ခမယူပဲ သပ်သပ် အပင်ပန်းခံလုပ်ပေးတာ.. အခွေဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်လာကြည့်လို့ရအောင် ။ One man show နဲ့ အဓိပ္ပါယ်တခြားစီပါ… ဒီပိုစ်တင်တဲ့သူငယ်ချင်းလည်း ခေါင်းစဉ်လေးတချက်ပြင်သင့်တယ်ထင်ပါတယ် ။
ခုက ပရိတ်သတ်က စော်ကားတာ သူက ဘာပြန်လုပ်ခဲ့လို့လဲလို့မေးပါရစေ
အောက်ကလူတွေ သောင်းကျန်းလို့ ထ်ိန်းတာလုံခြုံရေးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်.. ။
ဥပမာ… မိန်းကလေး အဆိုတော်က လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့ လက်ကမ်းပေးတာကို အောက်ဆွဲချတာတို့ .. အတင်းဆွဲထားတာတို့လုပ်ရင် လုံခြုံရေးက ရိုက်မှာပဲ… အဲလိုဆို အဲမိန်းကလေးအဆိုတော်နဲ့ဆိုင်သလား … လုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်သလား ဆိုတာစဥ်းစားကြည့်ပါ။
ပွဲလုပ်တဲ့ အဆိုတော်လည်း သူ့ပွဲကို အဆင်ပြေပြေ ချောချောမွေ့နဲ့ပဲ ပြီးဆုံးချင်မှာပဲ… သူ့ပွဲမှာ အဲလိုဖြစ်သွားရင် သူလဲ ၀မ်းနဲမှာပဲ.. ဒါကို ဘော်ဒါတို့ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ဖို့ကောင်းတယ်… ပွဲကြည့်ကထဲက ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြည့်ရင် ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာစရာမရှိဘူး… ဘာလို့ အဆိုတောာ်ကိုပဲ အပြစ်ပြောချင်နေကြတာလဲ.. ။
ငါတို့ကတော့ ဆဲချင်ဆဲမှာပဲ ခဲနဲ့ပေါက်ချင်ပေါက်မှာပဲ … သူကတော့ အဆိုတော်မို့သည်းခံ.. ဒါမျိုးလား…. ကိုယ်ချင်းလေးနဲနဲစာပေးကြည့်ကြနော်… ခု အရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာလည်း .. မသောင်းကျန်းတဲ့လူကို ဘယ်သူမှမရိုက်ဘူး။ ရိုက်ခံရတယ်ဆိုတာ ကိုယ်ဘယ်လိုအပြုအမူမျိုးလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့.။ ရိုက်ခံရတယ်ဆိုထဲက ရှက်ဖို့တော်တော်ကောင်းနေပြီ…. ။ဒါအဆိုတော် နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး ။ ငါလည်း ပွဲအစက အဆုံးထိရှိတာပဲ ..ငါဘာလို့အရိုက်မခံရသလဲ… တွေးကြည့်ကြပါ… ။ အရိုက်ခံရတဲ့သူက အနဲအကျဉ်းပါ.. ။ အောက်က သောင်းကျန်းလို့ လုံခြုံရေးကရိုက်တယ်..လုံခြုံရေးကရိုက်လို့ ရိုက်ခံရတဲ့လူက ပြန်ဆဲတယ်… ပြန်ဆဲလို့ လုံခြုံရေးက ငါ့လာမဆဲနဲ့ ဆဲချင် နောနော်သွားဆဲလို့ ပြောပြီး ရိုက်တယ်…
ရှင်းနေတာပဲ…. နောနော်က ကြားညပ်နေတာ။
အိမ်မက်ထဲကလူ အခွေထဲက သီချင်းတွေပဲဆိုသွားတယ်ဆိုတာ လုပ်တာက အခွေပရိုမိုးရှင်းပါ.. ပြောရတာထပ်နေပြီ။
lovesickkalay said: On September 1, 2010
ခံရတဲ့အထဲမှာလည်းပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ.. ပေါက်လား.. ဘယ်တော့မှ အဲလို မူးရူးပြီးဆဲတဲ့ထဲမှာ မပါတတ်ဘူး..ရှိုးပွဲလာကြည့်တယ်ဆိုထည်းက အဆိုတော်ကိုအားပေးဖို.လာခဲ့တာ.. မူးရူးပြီးဆဲဖို.မဟုတ်ဘူး.. ဂဲနဲ့ပေါက်ဖို.မဟုတ်ဘူး.. ငါလည်းရိုက်ခံရတဲ့သူတွေကိုကိုယ်ချင်းမစာလို.ပြောတာမဟုတ်ဘူး.. ရိုက်ခံရတဲ့လူက မှန်နေလို.ရိုက်ခံရတယ်ဆိုရင် ငါအရိုက်ခံရတဲ့ဘက်ကလိုက်မှာပဲ…. ကိုလေးဖြူတို.က ၀ါရင့်တွေလေ.. ရှိုးပွဲအတွေ.အကြုံတွေများကြီး ရှိတယ်လေ.. သူက ခုမှ One Man Show စဆိုတာလေ.. ပြီးတော့ဒါက ပရိုမိုးရှင်းပလုပ်တာပဲလေ… အများကြီးဆိုဖို.မှမဟုတ်တာ.. သူပွဲမထိန်းတတ်ဖူးဆိုတာတော့ ဟုတ်ကောင်းဟုတ်လိမ့်မယ်.. ဒါပေမယ့် သူက ပရိတ်သတ်အပေါ်မှာ မစော်ကားခဲ့ပါဘူး.. သူ.လောက်ပရိတ်သက်အပေါ်ကောင်းတာသူပါပဲ သူ.ပရိတ်သတ်အပေါ်မှာလည်း မာနကြီးတာ လည်းမရှီဘူး လူတန်းစားလည်းမရွေးတတ်ပဲလည်းပေါင်းတယ်… သူငယ်ချင်းလည်း သူ.အကြောင်းကို သေချာမသိလို.ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်.. သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါကွာ..
aung linn thu said: On September 2, 2010
ဟုတ်တယ်lovesickkalayမင်းပြောတာမှန်တယ်သူတို့တစ်ကယ်ပရိတ်သတ်ကောင်းပီသခဲ့လားလို့ကိုယ်ကို့ကိုယ်ပြန်မေးကြည့်ကြအုံး(ရမ်းကားတွေသူတွေ)အဆိုတော်ကိုအားပေးဖို့လာတယ်လားသောင်းကျန်းဖို့လာတာလားမူးရမ်းဖို့လာလားလို့ခံရတော့မှအဆိုတော်ချည်းဘဲအပြစ်ပုံချတယ်ကိုယ်ကကော ကောင်းခဲ့လို့လားသူငယ်ချင်းတို့ငါတစ်ခုပြောခဲ့ချင်တာကနောနော်ကမင်းတို့ကိုစော်ကားဖို့ဒီပွဲလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကသာစော်ကားနေတာငါပြောချင်တာကပရိတ်သတ်ကောင်းမဟုတ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာနော်အားလုံးကိုခြုံမပြောဘူးသယ်ချင်းnaynyoseesarမင်းပြောတာလဲဟုတ်ပါတယ်ငါမင်းတို့တွက်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့်မင်းတို့အဖြစ်ကပဲလှော်ကြားဆားညုပ်တဲ့အဖြစ်ကွာနောနော်ကငါကိုဂဲနဲ့ပေါက်တဲ့ကောင်ကိုရိုက်လို့လဲမပြောပါဘူးကွာစဉ်းစားကြည့်ကြပါ သယ်ချင်းတို့တစ်ကယ်မင်းတို့မုန်းသင့်တဲ့သူကနောနော်မဟုတ်ဘူးဒီလောက်ဆိုမုန်းသင့်တဲ့သူကိုသယ်ချင်းတို့သဘောပေါက်သင့်ပါပြီး
twitty said: On August 31, 2010
ဘယ်လိုများစော်ကားလို.လည်းမသိဘူးနောနော်က.. ပွဲပီးတော့ ပရိတ်သတ်အားလုံးကိုချစ်ပါတယ်လို.တောင်ပြောသွားတာ.. ဘယ်လိုများစော်ကားတာလဲ.. ငါလည်း ပွဲပြီးတဲ့အထိကြည့်ခဲ့တာပဲ.. မျိုးကြီးပွဲနဲ့လည်း ဘာမှယှဉ်စရာမလိုဘူး.. လက်မှတ်ချင်းလည်းကြည့်လိုက်အုန်း.. ဒါကိုနားမလည်ကြဘူးလား.. နောနော်အခွေမှာထည်းက အိမ်မက်ထဲကလူ ရှိုးပွဲဆိုတာပါထားတာလေ.. မျိုးကြီးကရှိုးပွဲသီးသန်. နောနော်က ပရိုမိုးရှင်း.. ငါတို.ရှေ့တည့်တည့်မှာပဲ လုံထိန်းတွေရိုက်နေတာတွေ.တာပဲလေ.. သူတို.ကမိုက်ရိုင်းကြတာကိုး.. ဆဲစရာလား .. ဆဲမယ်ဆိုရင်အစထည်းကလာမကြည့်ကြနဲ့.. စင်ကိုလည်းဂဲနဲ့ပေါက်စရာမလိုဘူး.. ဘယ်သူ.ဘက်ကမှလည်းပါနေတာမဟုတ်ဘူးနော်.. အမှန်တရားဘက်ကပဲပြောနေတာ.. နောနော်ကဘယ်တော့မှပရိတ်သတ်ကို မစော်ကားဘူးဆိုတာ ယုံကြည်တယ်..
ကော်ပီပြန်ပြထားတယ် အကုန်တော့မဟုတ်ဘူး အကုန်ဖတ်ချင်ရင်တော့ http://myanmargazette.net/economic-news-international-news-news-industry-people-in-the-news-us-news-news/22432 အဲမှာပြန်ဖတ်ကြတော့… ရှင်းပြထားတဲ့ဟာတွေကို..
ဘာလို. comment ရေးတာ မတက်တာလဲ.. :((
ပရိတ်သတ်ကိုစော်ကားခဲ့သော..နောနော်..(28.8.2010-သူဧ။် one man show)..မှ ဆိုတဲ့ Post မှာလည်းရှင်းထားပြီးသားပါ… အဲမှာတော့ သေသေချာချာရှင်းထားတာတွေရှိပါတယ်.. သေချာပြန်ဖတ်လိုက်ကြပါ… အဲဒါဆိုရင်တော့ နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို.ထင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်ထင်တာ နောနော် ပရိတ်သတ်ကို မစော်ကားပါဘူး …. live show ဆိုတာ အစီအစဉ်တကျ လုပ်သွားတာပဲ …. ပရိတ်သတ်တောင်းတဲ့သီချင်း သီဆိုဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက် မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါလည်း ရှိပါတယ်… ပွဲကြေငြာကတည်းက သူ့အခွေ “အိမ်မက်ထဲကလူ” သီချင်းတွေပဲဆိုမယ်ဆိုတာ လူတိုင်းသိထားတာပါ… အဲ့ဒါကို ရေသန့်ဘူးနဲ့ ပေါက်တဲ့သူကို နောနော်က ရိုင်းတယ်လို့ပြောရင် မမှားပါဘူး …. ပရိတ်သတ်တွေထက် သူခံစားရတာက ပိုဦးမှာပါ …. လုံခြုံရေးပါလာတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူးလေ နောနော်လည်း .. လုံခြုံရေးကို ပြန်လုပ်ရင်တော့ လုပ်တဲ့သူ ခံရမှာပဲ … သေချာတာကတော့ နောနော်က ပရိတ်သတ်ကို စော်ကားချင်တဲ့စိတ် လုံးဝမရှိတာပဲ …